naxaas (ii) xabagta acetaldehyde copper biyaha
(rnn) (lng) (kh) (rnn) (lng)
(ka) (xoog leh) (xoog leh) (D) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O
Waa maxay xaalada falcelinta ee CuO (ii) oxide ee uu la falgalo CH3CH2OH ()?
Dhacdada ka dib CuO (copper(ii) oxide) waxay la falgashaa CH3CH2OH ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O
CuO + CH3XULASHO3 → CH3COCH3 + Cu + H2O
naxaas (ii) xabagta acetone copper biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CuO + CH3XULASHO3 . CH3COCH3 + Cu + H2O
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CuO (ii) oxide ee ka falcelisa CH3CHOHCH3 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COCH3 (acetone) iyo Cu (naxaas) iyo H2O (biyaha)?
Dhacdada ka dib CuO (copper(ii) oxide) waxay la falgashaa CH3CHOHCH3 ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3CHOHCH3, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CuO + CH3XULASHO3 . CH3COCH3 + Cu + H2O
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3CHOHCH3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CHOHCH3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CHOHCH3 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3COCH3 (acetone)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COCH3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COCH3 (acetone) badeecad ahaan?
copper naxaas (ii) xabagta naxaas (i) oksaydh
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu + CuO → Cu2O
Waa maxay xaaladda falcelinta Cu (naxaasta) ee uu kula fal-galo CuO (Copper(ii) oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu2O (copper(i) oxide)?
Dhacdada ka dib Cu (naxaasta) waxay la falgashaa CuO (Copper(ii) oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu + CuO → Cu2O